Than | Jan 22, 2010 | Comments 4
ကိုရဲမင်းဦး နှင့် မသူဇာ ဇနီးမောင်နှံတို့၏ ပထမဆုံးသမီးဦး မမေသူဦး ကိုဇန်န၀ါရီလ(၂၁)ရက် ကြာဿပတေးနေ့ ညနေချမ်း(၄နာရီ၃၃မိနစ်)တွင် ကောင်းမွန်အောင်မြင်စွာဖွားမြင်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အဖေတူ အမေတူ သမီးဦး မေသူဦး ၏မွေးဖွားခြင်းမင်္ဂလာမှသည် ဘ၀တလျောက်လုံးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖြာဖြာနှင့်ပြည့်စုံပါစေ၊ မွေးမိခင်ဖခင်သို့ ကောင်းကျိုးဖြစ်စေသော မွေးဖွားရာမျိုးနွယ်သို့ကောင်းကျိုးဖြစ်စေသော ဦးဆောင်အမျိုးသ္မီးကောင်းအဖြစ် ကောင်းကျိုးဆောင်အမျိုးသ္မီးမြတ်အဖြစ် အောင်မြင်စွာရောက်ရှိပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါသည်။
သမီးဦးရတနာ မေသူဦးရတနာ ကောင်းကျိုးရတနာအဖြာဖြာ အသက်တစ်ရာကျော်ရှည်စေသောဝ်။
Question Mg Mg says:
Article 1. Section2မှာ ၁၈နှစ်ကျော်မှ အသင်းဝင်လို့ ရမယ်ပြောထားတယ်၊ အဖွဲ့အနေနဲ့ ကလေးကို လက်ခံတဲ့အခါ ကာယကံရှင်ရဲ့ သဘောထားကို ဘယ်လိုမေးမှာလဲ။ just curious…Congratulation!
Thanks UNOB and all of our friends.
May Thu, Thu Zar & Ye Min
သမီးလေး`မေ´ သည် တိုးပွါးလာသော UNOB အဖွဲ့ဝင်သစ်ဖြစ်ပါကြောင်း ယနေ့မနက်တွင် ကိုရဲမင်းဦး မှဂုဏ်ယူစွာနုတ်ဖြင့် စာရင်းသွင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။
သမီးလေး “မေ” နားဆင်ဖို့ 
သမီးမေမေ အသစ်ကလေးဆိုဖို့ 